पहिलो जेनरेशन एप्पल वाच र श्रृंखला १ एक समान छैन म म्याकबाट हुँ
सुरुमा मलाई मेरो श doubts्का थियो, र त्यो यो हो कि सबै प्रयोगकर्ताहरू तिनीहरूसँग थिए। के परिवर्तन भएको छ? नयाँ घडी एप्पल वाच श्रृंखला २ हो, त्यसोभए श्रृंखला १ वास्तवमा कति हो? ठिक छ, म तपाईंलाई जवाफ दिनेछु: यो एक नयाँ मोडेल हो, हो, यस वर्ष, अपडेट गरिएको र धेरै नयाँ। कसरी एउटा श्रृंखला अर्को भन्दा भिन्न छ? कुन चाँहि मैले किन्नुपर्दछ जुन म यसलाई दिन्छु र त्यसको प्रयोगकर्तामा आधारित छ? के यो १०० डलर बचत गर्ने र श्रृंखला १ को छनौट गर्नु राम्रो हो वा म दोस्रोमा जान्छु?
आज म यसको बारेमा कुरा गर्नेछु, र यो हो कि मैले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे। होसे अल्फोसिआले मलाई पहिले नै चेताउनी दिएका थिए कि उनले यस विषयमा बारम्बार आफ्नो विचार बदल्नेछन्। मैले धेरै टिप्पणी गरे जुन मैले एप्पल वाच सीरिज २ सिफारिश गरेन र यो के थियो को लागी धेरै महँगो देखिन्थ्यो। म यसमा अडिग रहन्छु, त्यसैले मैले अहिले श्रृंखला १ एल्युमिनियम किन्नको लागि सोचेको छु। म दुबै मोडेल बीच भिन्नता र सुविधाहरू र हानिहरूको बारेमा धेरै सिक्दै छु। यसमा वाच र मेरो टेकवेका विवरणहरूको लागि पढ्नुहोस्।
1 एप्पल वाच श्रृंखला १ वा श्रृंखला २?
2 तपाईंले श्रृंखला २ मा फेला पार्नुहुनेछ के
3 उचित समानताहरू, मूल्यहरू जुन गर्दैन
एप्पल वाच श्रृंखला १ वा श्रृंखला २?
म भन्छु, मैले लेख र समाचार देखेको छु कि नयाँ को श्रृंखला २ हो र अर्को २०१2हो। यो छैन। यो सत्य हो डिजाइन मा ती सबै समान छन् र त्यो अधिक वा कम समान उपकरण हो, तर त्यहाँ केहि परिवर्तन हुन्छ। पहिलो एप्पल वाच र श्रृंखला १ बीच बिभिन्न भिन्नताहरू छन्। सिद्धान्तमा यो केवल प्रोसेसर मात्र हो, तर यसले अनुवाद गर्दछ: अधिक ब्याट्री, राम्रो प्रदर्शन, साथै नयाँ डुअल-कोर प्रोसेसरको साथ नदेखीएको एक शक्तिको साथै। तर यो यो हो कि भिन्नताहरू जुन हामी नयाँ सीरिज २ को सम्मानमा भेट्दछौं यति धेरै छैनन्। धेरै प्रयोगकर्ताहरू जो वाच हेर्न जाँदैछन् नयाँको लागि जान्छन्, जुन कि € 1 at starts मा सुरू हुन्छ, जुन उनीहरूले क्रान्तिकारीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, तर श्रृंखला १ सिफारिस हुन सक्छ यदि हामी प्रयोग गर्दैनौं भने। उपन्यास को। ताकि तपाईंसँग यो स्पष्ट छ। तल म नाम र संक्षिप्त वर्णन गर्नेछु श्रृंखला २ को त्यो श्रृंखला १ छैन।
तपाईंले श्रृंखला २ मा फेला पार्नुहुनेछ के
ग्रेटर दायरा र मोडेलहरूको क्याटलग। श्रृंखला २ सबै मोडेलहरूमा उपलब्ध छ, एल्युमिनियमदेखि एडिन्सनसम्म स्टेनलेस स्टीलको माध्यमबाट। अर्कोतर्फ, श्रृंखला १ एक सिलिकॉन पट्टाको साथ मात्र एल्युमिनियममा फेला पर्नेछ। तर यदि तपाईं यो मोडेलको लागि अप्ट आउट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई एउटा श्रृंखला र अर्को बीचमा छनौट गर्नमा कुनै समस्या हुनेछैन।
GPS डुअल-कोर प्रोसेसरमा निर्मित। यो श्रृंखला २ को लागि राम्रो प्रोसेसर होइन, यो उही हो। २०१2को पहिलो हेर्नुहोस् भन्दा छिटो, तर दुबै श्रृंखलाहरू एकै हुन्। यदि तपाईंलाई जीपीएस चाहिन्छ वा चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले यो मोडेलबाट सुरु गर्नुपर्नेछ, किनकि श्रृंखला १ छैन।
यो एप्पल वाच 50० मिटर पानीमा पनडुब्बी छ। शृंखला १ स्प्याश प्रतिरोधी थियो, जस्तै आईफोन and र plus प्लस। यसको मतलब यो होइन कि ग्यारेन्टीले पानी भage्ग गर्दछ, तर यो जीवित रहन्छ र त्यहाँ स्नान गर्ने वा नुहाउने प्रयोगकर्ताहरू पनि छन्। शृंखला २ हो तपाईंले कुनै डर बिना यसलाई भिजाउन सक्नुहुन्छ र समुद्र तट, समुद्र वा नदी र पोखरीमा पूरै सुरक्षामा लैजानुहुन्छ।
एक स्क्रीन पहिले भन्दा उज्यालो। दुई पटक सम्म। शृंखला १ 1० निटहरूमा जान्छ, श्रृंखला २ सम्म १००० निट्स। तिनीहरू दुबै राम्रा देखिन्छन्, सूर्यमा पनि, त्यसैले यो मूल्य वृद्धि मूल्यको छैन।
उचित समानताहरू, मूल्यहरू जुन गर्दैन
त्यो एप्पल वाचका भिन्नताहरू हुन्। अन्तिम चीज जुन श्रृंखला अलग गर्दछ मूल्य हो। फरक १०० डलर हो। के यो GPS लाई अधिक भुक्तान गर्न लायक छ, यसलाई डुब्ने क्षमता, वा एक उज्यालो स्क्रीन? मलाई लाग्छ कि त्यो मेरो मामलामा होइन, किनकि मैले त्यो प्रयोग गरिरहेको थिइनँ। म पैसा बचत गर्न रुचाउँछु, मलाई थाहा छ कि मेरो मोडल सिलिकॉन एक हो र यो दुबै श्रृंखलामा छ। शक्ति उही समान छ र त्यसैले यसलाई पछाडि छोड्ने छैन। Mm 38 मिमी सिरीज १ मोडेलको लागत € 1 339 and र mm२ मिमी मोडल € 42 369।। म ठूलो को लागी जान्छु, धेरै जसो प्रयोगकर्ताहरु लाई।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple Watch » पहिलो जेनरेशन एप्पल वाच र श्रृंखला १ एक समान छैन
प्रश्न ... खेल र श्रृंखला २ बीच के भिन्नता छ?
यदि मेमोरीले मलाई सही सेवा दिन्छ भने वाच स्पोर्ट (पहिलो जेनरेशन) र शृंखला २ बीचको भिन्नता भनेको यो हो कि GPS, एक उज्यालो स्क्रिन, र नयाँ, छिटो चिप एकीकृत गर्दछ। मलाई लाग्छ कि त्यहाँ कुनै फरक छैन, यद्यपि मलाई लाग्छ मलाई यो याद छ कि यसले थोरै ब्याट्री समाहित गर्दछ, तर यो थप GPS को उपभोग द्वारा रद्द गरियो।
माफ गर्नुहोस्, म श्रृंखला १ मा कुरा गर्दै थिएँ। यो पोष्टको शीर्षक हो तर तपाईंले उनीहरूसँग तुलना गर्नुभएको छैन
ठीक छ, मैले तपाईंलाई श्रृंखला २ सँग तुलना गरेँ। ठीक छ, म लेखको लेखक होइन। स्पोर्ट (पहिलो जेनरेशनको रूपमा किनभने यो अब अवस्थित छैन), र वाच श्रृंखला १ बीचमा भिन्नता भनेको पर्दा उज्यालो चम्किन्छ र प्रोसेसर छिटो हुन्छ। मलाई लाग्छ कि ती मात्र भिन्नताहरू हुन्। यो उही दृश्य हो तर ती पक्षहरूमा केही सुधार गरियो।
7000 श्रृंखला; जुन श्रृंखला १ वा श्रृंखला O सँग सम्बन्धित छ। 1००० श्रृंखला मोडेलको नयाँ मूल्य के थियो? मुरी मुरी धन्यवाद
म्याकोस सिएराको स्थापनामा समस्याको समाधान: "स्थापनाकर्ता पेलोडको हस्ताक्षरको प्रमाणीकरण गर्न सकिएन"
नयाँ आईफोन and र आईफोन Plus प्लसको साथ सर्फ सत्र